ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားသော တရုတ်စစ်သား ၁၀၉ ဦး၏ ကြွင်းကျန် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေး - Xinhua News Agency
အင်ချွန်း ၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
၁၉၅၀ -၅၃ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုရီးယားစစ်ပွဲတွင် ကျဆုံးခဲ့သည့် တရုတ်စစ်သား ၁၀၉ ဦး၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော နောက်ထပ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ၈ ကြိမ်မြောက် ကြွင်းကျန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ရှိ အင်ချွန်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Chang Zhengguo နှင့် တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Park Jae-min တို့အတူတကွတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Xing Haiming က ကြွင်းကျန်ပစ္စည်းများထည့်ထားသော အခေါင်းများအား လေယာဉ်ပေါ်သို့ မသယ်ဆောင်မီ အခေါင်းတစ်ခုချင်းစီကို တရုတ်နိုင်ငံတော်အလံလွှမ်းခြုံဖုံးအုပ်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၅၀-၅၃ ကိုရီယားစစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားသော တရုတ်စစ်သား ၁၀၉ ဦး၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့တော်ရှိ အင်ချွန်းလေဆိပ်၌ စီတန်ခင်းကျင်းထားစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယခုကျင်းပသောအခမ်းအနားသည် ၈ ကြိမ်မြောက် ကြွင်းကျန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သော အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သော ၇ ကြိမ်အတွင်း တရုတ်ပြည်သူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအာဇာနည် ၇၁၆ ဦး၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၄၃၇ ခု ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၆၈ ခု ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၃၆ ခု ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၂၈ ခု ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၂၀ ခု ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၁၀ ခု နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၁၁၇ ခု အသီးသီး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်အခမ်းအနားတွင် တရုတ်နိုင်ငံ စစ်မှုထမ်းဟောင်းရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Chang Zhengguo က အမှာစကားပြောကြားရာ၌ တရုတ် နှင့် တောင်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း၍ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု စဉ်းမျဉ်းဥပဒေသများ ၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု စိတ်ဓာတ်များ နှင့် လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအာဇာနည်များ၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်မှာ ၈ နှစ်ဆက်တိုက်ပင် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းကာလအတွင်း ကြွင်းကျန်ရစ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းပေါင်း ၈၂၅ ခုကို အမိမြေသို့ ပြည်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
ထို့ပြင် Chang က ယခင်နှစ် COVID-19 ကပ်ရောဂါပြန့်ပွားချိန်မှ စတင်ကာ နှစ်ဖက်စလုံးအနေဖြင့် အဆိုပါပစ္စည်းများပြန်လည်လွှဲပြောင်းရေး အပြည့်အဝအောင်မြင်မှုရရှိရန် ပိုမိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံကချီးကျူးပါကြောင်း ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများနှင့် နက်ရှိုင်းသော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ တရုတ်ပြည်သူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအာဇာနည်များ၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်မှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နောက်ထပ်ကြွင်းကျန်ရစ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ၎င်းတို့၏ အမိမြေသို့ ပြန်လည် ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Chang က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
INCHEON, South Korea, Sept.2(Xinhua) — South Korea on Thursday returned 109 more remains of Chinese soldiers killed in the 1950-53 Korean War.
During the ceremony, Chinese Ambassador to South Korea Xing Haiming covered the coffins with China’s national flag before the coffins were carried onto the airplane.
It marked the eighth repatriation ceremony. In the previous seven repatriations, South Korea had returned the remains of 716 Chinese People’s Volunteers martyrs killed in the Korean War, including 437 in 2014, 68 in 2015, 36 in 2016, 28 in 2017, 20 in 2018, 10 in 2019 and 117 in 2020.
At this year’s ceremony, Chang said China and South Korea have jointly carried out handover of the remains of the Chinese People’s Volunteers martyrs in South Korea for eight consecutive years and returned in total 825 remains to their motherland, following humanitarian principles and in the spirit of friendship and practical cooperation.
The Chinese side appreciated the efforts made by the South Korean side and is ready to deepen friendly cooperation and exchanges between the two countries, promote the protection of the remains of the Chinese People’s Volunteers martyrs in South Korea and bring more remains of the martyrs back to their motherland as soon as possible, Chang added. Enditem
Photos- Remains of Chinese soldiers killed in the 1950-53 Korean War are casketed in Incheon, South Korea, Sept. 1, 2021. The remains of 109 Chinese soldiers killed in the 1950-53 Korean War were casketed in South Korea on Wednesday to be sent back to China. The ceremony to lay the 109 remains in coffins was held in Incheon, west of the capital Seoul. (Xinhua/Wang Jingqiang)